ဟိုးတလောကရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ST Café မှာ နောက်ထပ်ဘာတွေထူးခြားနေပြီလည်း သိချင်နေကြတဲ့သူတွေများ ရှိနေမလားနော်…!! 1320 views
ST Café ဆိုရင်တော့ဘာဆိုင်လေးလည်းဆိုတာ တန်းသိကြမှာပဲနော်… တစ်ဆိုင်လုံး Doraemon အရုပ် တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီး Food Menu, Drink Menu အစုံရတဲ့ဆိုင်လေးပါပဲ။ ကိုယ်လည်း VIP Card ရပြီးထဲက Discount လျှော့ပေးလို့ ၈မိုင်ဖက်ရောက်တိုင်းခဏခဏသွားဖြစ်တယ် (ခဏခဏသွားတာ မျက်မှန်းတန်းမိနေရင် VIP Card ပေးတယ်နော်.. ) ST မှာအရင်ကထက်ပိုထူးခြားသွားတာက အရင်ကထက်ပို ပြီးတော့တောင် ဒိုရေမွန်ပစ္စည်းတွေပိုများသွားတယ်။ ဒိုရေမွန်အသုံးအဆောင်၊ အကျီင်္၊ အိတ်၊ ရေဗူး၊ အရုပ် အပြင် အခြားအသုံးအဆောင်လေးတွေအရင်ကထပ်ပိုစုံလာတယ်။ ဆိုင်ရဲ့အလယ်မှာခုံတန်းကြီးတွေလုပ်ပြီး တော့ကို ထားထားတာ။ ပြီးတော့ မီနူးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အရင်ကထပ်ပိုများသွားတော့ရွေးချယ်မှုတွေပိုများ သွားပြီ…. Western Food တွေပါထပ်တိုးလာပြီ။
အစားအသောက်မီနူးပိုင်းမှာဆိုရင် အရင်က Chinese menu တွေထပ်ကို အခုက Western Type Menu တွေ ထပ်တိုးသွားပြီ။ Set menu လေးတွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ တော်တော်တော့စုံသွားပြီ...
Bologneise Spaghetti - ဒါကတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ စပါကတီဆိုရင်အီအီလည်လည်တွေနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်သိပ်မစားဖြစ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းမှာတော့ ကိုယ်လည်းနည်းနည်းမြည်းကြည့်လိုက်မှ သူ့ရဲ့အရသာက ချဉ်သလို၊ စပ်သလိုလေး။ Tomato Sauce နဲ့လည်းဆိုတော့ အနံ့လေးလည်းမွှေးမွှေးလေး။ သူကတစ်ပွဲကို (၄၀၀၀)ကျပ်။ Spaghetti တစ်ပွဲလေးထောင်ဆိုတာတော့တန်ပါတယ်။
ကြက်ပင်စိမ်း - ကြက်သားကိုမှ ပင်စိမ်းလေးနဲ့ချက်ထားတော့ အနံ့လေးကလည်း မွှေးမွှေးလေး။ အရသာက လေးသလိုလိုလေးနဲ့ မဆိုသလောက်လေးစပ်တယ်။ ထမင်းလေးနဲ့စားရင်ပိုလိုက်ဖက်တယ်။ သူတစ်ပွဲကို (၄၀၀၀)ကျပ်။
Caesar Salad - မရောနိစ့်လေးရယ်၊ ဆလပ်နဲ့၊ မုန်လာဥနီလေးအပြင် ချိစ့်လေးလည်းပါတော့ စိမ့်စိမ့်လေးပေါ့။ ဒိန်ခဲလေးတွေလည်းပါတော့ အီနေရင်အဲ့ဒါလေးစားလိုက်… ချဉ်ချဉ်လေး။ ဈေးနှုန်းကတစ်ပွဲကို (၄၀၀၀)ကျပ်။
Fried Sandwich – Sandwich ကိုမှကြော်ထားတာဆိုတော့ အဆန်းလေးပေါ့။ ပုံမှန်စားနေကျလိုမဟုတ်ပဲ ကြော်ထားတော့ ကြွပ်ကြွပ်လေးပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ အအေးနဲ့အာလူးကြော်လေးလည်းပါတော့ တစ်ယောက်စာတော့အေးဆေးပဲ။ ဒီ တစ် set ကိုဈေးနှုန်းက (၃၅၀၀)ကျပ်။
နာနာတ်သီးထမင်းကြော် - ဟီး… နာနာတ်သီးကြီးထဲမှာ ထမင်းကြော်တွေထည့်ထားတာ… အဆန်းကြီး။ အထဲမှာ အသီးအရွက်တွေအစုံပါတယ်။ အရသာကတော့အချိုဘက်လေးပဲသွားတယ်။ ဈေးနှုန်းကတစ်ပွဲကို (၅၀၀၀)ကျပ်။
Pepperoni Pizza - ပီဇာအသေးလေး။ သုံးယောက်လောက်တော့အနည်းဆုံးစားလို့ရတယ်။ ပေါင်မုန့်သားနူးနူး ညံ့ညံ့လေးနဲ့ ချိစ့်အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေး။ သူကတစ်ချပ်ကိုမှ (၇၀၀၀)ကျပ်။
Grilled Chicken breast with vegetable and brown Sauce - သူက ကြက်သားကိုမှ ဆော့စ်မွှေးမွှေးလေးနဲ့ အိအိလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာ။ Sauce လေးကမချိုဖူး၊ မအီပဲ…စားလို့အဆင်ပြေတယ်။ ဈေးနှုန်းက (၆၀၀၀)ကျပ်
ST PanCake - ပန်းသီး၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ရေခဲမုန့်လေးတွေကိုမှ ပျားရည်စမ်းထားတယ်။ ချိုချိုလေး
Domino - အသီးတွေအစုံပါတဲ့အပြင် Decoration လေးလည်းအမိုက်စားလေးနဲ့… ဓါတ်ပုံရိုက်လို့တောင် လှသေး… သူကတစ်ပွဲကို (၂၅၀၀)ကျပ်။
Magic Blue Lady Soda - ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ ရှရှလေး။ အမောပြေစေတဲ့အအေးလေး။ သူကတစ်ခွက်ကို (၂၂၀၀)ကျပ်။
ဒီဆိုင်လေးမှာ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့ကနေစပြီး (၁၂)ရက်နေ့အထိ 10% Discount ပေးမှာတဲ့နော်… လတိုင်းတော့ ပရိုမိုးရှင်းတွေလုပ်နေတယ်။ VIP Card ရှိတဲ့လူတွေကိုဖုန်းခေါ်ပေးတယ်။ VIP Card ရအောင်ခဏခဏသွားကြ :P
လိပ်စာသိချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် အမှတ် (၈၉)၊ ၈မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာပါ။ မွေးနေ့ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်း လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ တခုခုစုံစမ်းချင်ရင် 09-771810087 ဒီဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ ထမင်းစားချိန်နဲ့ ညနေပိုင်းလောက်ဆိုလူနည်းနည်းတော့ရှုပ်တတ်တယ်နော့…
#ST_Cafe #ST #Doraemon #Cafe #Bakery #Western_Food